:: My Little World ::: April 2011
Durian lovers... This post is dedicated to you!!!
Durian Fiesta 2011
1 March - 17 July 2011
Google: GoodWood Park Hotel - Durian Puff
Posted by Nay Nay Naing at 4/21/2011 02:48:00 PM5comments
ဒီမနက် Bus ကားပေါ်မှာ၊ အပေါ်ဘက် လက်ကိုင်တန်းတွေနားမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ကြော်ငြာတွေကို သတိထားလိုက် မိတယ်။
ရေးထားတာက IRIS... ကိုယ် IRAS လို့ ဖတ်မိသွား စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ပူပူနွေးနွေး ဟိုတလောကမှာ ဒီက အစိုးရကို အခွန်ပေးဖို့IRAS ဆိုဒ်ဝင်ပြီး လိုတာတွေ လုပ်ထားရတာ မဟုတ်လား။ စိတ်ထဲ ဒီစာလုံး စွဲနေတယ်။ နောက်တစ်ခါ သေချာထပ်ကြည့်မှ SBS Transit ရဲ့ IRIS မှန်း သိလိုက်ရတယ်။ App Store မှာ ရှာကြည့်လိုက်တာမှာ အခု သိပ်မကြာခင်ကမှ အသစ်ထွက်တဲ့ Application ဆိုတာနဲ့ Install လုပ်လိုက် ပါတယ်။ စမ်းကြည့်ရတာပေါ့။
IRIS မှာ iris NextBus နဲ့iris Journey Planner ဆိုပြီး နှစ်ခုပါတယ်။ ကောင်းမကောင်း၊ ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်မ၀င် သေချာသိချင်ရင်တော့ စင်္ကာပူက အိုင်ဖုန်းသုံးသူတွေ ဖုန်းမှာ Install လုပ် စမ်းသုံးကြည့်ကြပါ။ Install လုပ်ရတာ လွယ်သလို၊ မလိုချင်ရင် ပြန်ဖျက်ဖို့ ကလည်း ခက်တဲ့အရာမှ မဟုတ်တာ။
Posted by Nay Nay Naing at 4/20/2011 11:52:00 PM 1 comments
From Blog Template
အချိန်ဖြုန်းတယ် ပြောမလား။ အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာပြီး Blog ရဲ့ Template ကို လျှောက်ပြောင်းကြည့်ဖြစ်တယ်။ Google မှာ လိုက်ရှာ၊ တွေ့ တာတွေထဲက မျက်စိသင့်ရာ Template တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းကြည့်တယ်။ သူများတွေ အဆင်သင့် ရေးတင်ထားတာတွေကို သုံးတာဆိုတော့ ပြောင်းရတာ သိပ်မြန်တယ်။ ၄ ခုမြောက် Template ကို စမ်းအပြီးမှာ အိပ်ချိန် ရောက်လာတာနဲ့ ဒီနေ့ အတွက် နောက်ဆုံး စမ်းသပ်ခြင်းအနေနဲ့လက်ရှိ Template ကို ပြောင်းတင်ထား လိုက်တယ်။ အခုဟာက ခပ်ရှင်းရှင်းဆိုတော့ နောက်နေ့အချိန်မရရင်တောင်မှ ဒီအတိုင်း ခန ထားလိုက်လို့ ရတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 4/19/2011 11:45:00 PM7comments
ဟိုးအရင်က ၂၀၁၀ နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်က ဖုန်းမှာ ဒီဂိမ်း ၀ယ်ဆော့ခဲ့ဖူးတယ်။ ဟိုတနေ့က သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်က တစ်ဆင့် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့လင့်တွေ့ လိုက်တာနဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ သွင်းပြီး ခုရက်ပိုင်းမှာ ဒီဂိမ်းကို နည်းနည်း ပြန်ဆော့ဖြစ်တယ်။
For Windows (XP and 7)
Credit to Kelvin
Posted by Nay Nay Naing at 4/17/2011 10:28:00 PM2comments
နေ့ - မိုဃ်းဇော်
ကျွန်တော်တို့သွားတိုက်ကြတယ်။
ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ခန်ဓာကိုယ်ကြီးကို ဆပ်ပြာတိုက်
ကျက်သရေအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသော ကမ္ဘာကြီး
မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသော မနက်ခင်း၌
[ပန်းအင်္လကာ၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၀၈]
Posted by Nay Nay Naing at 4/05/2011 08:45:00 AM0comments